Apho ukhwela khona iiBhayisekile ezimdaka kufutshane nam
ezaposwa ngomhla Ngamana 20, 2021 By danna
Ezona zithuthuthu zikhawulezayo eziyi-1000cc ziqhele ukukhawulelwa kwi-188 mph ngerev limiter yazo, ekhusela i-injini yesithuthi ngokucutha isantya esiphezulu. Nangona kunjalo, ukuba ezi zithuthuthu zinesantya esiphezulu
Uzifumana Njani Zombini Iibhayisekile Oras
Uzifumana njani zombini iibhayisekile kwi-ORAS Fly ukuya kuRoute 119 kwaye unyuke i-Waterfall ekufutshane. Bhabha kwiNdlela ye-111 kwaye ungene entlango usebenzisa iGo-Goggles. Bhabha uye e
Isigcina-ntloko sebhayisekile: ukhetho, ubungakanani, ukubaluleka
ezaposwa ngomhla Julayi 12, 2014 Septemba 15, 2021 By danna	akukho Izimvo kwisigcina-ntloko sebhayisekile: ukhetho, ubungakanani, ukubaluleka
Ujongene nokukhetha: uthenge i-helmet okanye uthathe intombazana kwindawo yokutyela epholileyo, yiyiphi i-helmet oya kukhetha? Ndiwubeke lo mbuzo ixesha elide, kodwa ekugqibeleni lixesha lokuthetha malunga nendlela yokukhetha i-helmet yebhayisikili. Njengommi onoxanduva, ndithenge isigcina-ntloko ngokukhawuleza emva kokuthenga…
Funda Okuninzi "Isigcina-ntloko sebhayisekile: ukhetho, ubungakanani, ukufaneleka" »
egqithileyo 1 ... 116,771 116,772